United Airlines dia manambara sidina vaovao tsy an-kiato avy any Etazonia mankany Jordania
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jordanie » United Airlines dia manambara sidina vaovao tsy an-kiato avy any Etazonia mankany Jordania
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jordanie • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Amman Jordan mankany Washington DC
Faly ny Birao fizahan-tany any Jordania (JTB) hanambara sidina mivantana vaovao, hanamora kokoa ny sidina amerikanina hanidina ho any Jordania. United Airlines dia hanolotra sidina mivantana avy any Washington DC mankany Amman manomboka ny 5 Mey 2022, ary hanidina intelo isan-kerinandro. Ity no sidina mivantana voalohany hampifandraisana ireo renivohitra roa.
Ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny Jordan Tourism Board dia nanondro fa 2022 dia vonona ny hamaky ny firaketana momba ny dia mankany DC.
65 isan-jaton'ny mpandraharaha ara-barotra any Etazonia no manana famandrihana fitsangatsanganana amin'ny fararanon'ny 2021 mankany Jordania, raha ampitahaina amin'ny 15 isan-jato fotsiny tamin'ny vanim-potoana teo aloha.
Miaraka amin'ny kaonty COVID mazava hita manerana ny firenena, dia tokony hahatsiaro ho maivamaivana ny mpitsangatsangana rehefa mitsidika an'i Jordania.
"Faly izahay manangana ny renivohitra vaovao ho an'ny renivohitra, Washington DC mankany Amman, serivisy, manamora ny fampifandraisana olona bebe kokoa amin'i Jordania sy ny lova sy ny kolontsaina manankarena atolotry ny firenena", hoy i Patrick Quayle, filoha lefitra zokiny iraisam-pirenena Tambajotra sy fiaraha-miasa.
Ny fanambarana avy any United dia mampiseho ny fahatokisan'ny kaompaniam-pitaterana an'io toerana io rehefa manomboka ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena taorian'ny fahapotehan'ny areti-mandringana. Ity hetsika ity dia manohana ihany koa ny fanadihadiana vao tsy ela izay notontosain'ny Birao fizahantany Jordania izay nanondro fa ny 2022 dia vonona ny hamaky ny firaketana momba ny dia mankany amin'ilay toerana haleha. Ny fanadihadiana dia naneho ihany koa fa ny 65 isan-jaton'ny mpandraharaha ara-barotra any Etazonia dia nanana famandrihana fitsangatsanganana tamin'ny fararanon'ny 2021, raha 15 isan-jato monja tamin'ny vanim-potoana teo aloha.
“Faly izahay mandray ny mpandova lova ho any Jordania mba hanampy amin'ny fanokafana ny orinasa eo anelanelan'ny renivohitra Washington DC sy Amman. Izahay dia mandray hatrany ireo mpandeha amerikana mankamin'ilay Fanjakana hiaina ny kolontsaina mahatalanjona sy ny fahasamihafana atolotry ny Jordania. ” Nozaraina Abed Al Razzaq Arabiyat, mpitantana ny Birao fizahan-tany ao Jordania.
"Manantena ny handray ny United Airlines ho any Amman izahay, ary hiara-hiasa hitondra mpizahatany maro kokoa hiaina ny firenentsika mahatalanjona," hoy i Malia Asfour, talen'ny birao fizahan-tany any Jordania Amerika Avaratra. “Miaraka amina protokol COVID mazava hita manerana ny firenena, dia tokony hahatsiaro ho maivamaivana ny mpitsangatsangana rehefa mitsidika an'i Jordania. Ity dia dingana lehibe iray amin'ny fampifandraisana ny renivohitr'i Jordania amin'i Washington DC, ary famporisihana ireo mpandeha amerikana mba hamandrika traikefa amin'ny dia manan-tantara amin'ny toerana manintona malaza eran-tany toa an'i Petra, Wadi Rum ary ny Ranomasina Maty. ”
Raha te hahalala bebe kokoa momba ilay zotra vaovao, tsidiho united.com/en-us/new-routes.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny misy dikany mandeha any Jordania tsidiho ny tranonkala www.hitran.xom.